Nuuralhudaa, Author at NuuralHudaa - Page 2 of 28
Nuuralhudaa 271 posts 1 comments
Dhaamsi gareewwan jibba Diin Islaam qaban irraa Masjidoota Jarman keessa jiraniif ergame hawaasa…
Nuuralhudaa	 Sep 14, 2019 0
Dhaamsi gareewwan jibba Diin Islaam qaban irraa Masjidoota Jarman keessa jiraniif ergame hawaasa Muslimaa sodaachise. Magaalota Jerman gara garaatti gareewwan ol'aantummaa ummata adii leellisan dhaabbilee Islaamaa fi Muslimaa jala bu'anii…
Falasxiin, Alquds, Gaazaa
Gamtaan biyyoota Islaamaa dhimma dachii Falasxiin ilaalchisee kora ariifachisaa geggeessuuf tahuu…
Muummichi ministeera Israa’il Benjaamiin Netiniyaahuu Filaannoo biyyaatti "September 17,2019 geggeeffamu irratti, irra deebiin kan filatamu yoo ta'e, dachii Falasxiin humnaan kutuuf waadaa galla" jedhe. Gamtaan biyyoota Islaamaa ibsa…
Afrikaa Kibbaatti haleellaafi saamichi lammiilee biyyoota biraa irratti raawwatamu itti fufe jira
Nuuralhudaa	 Sep 9, 2019 0
Torbaan dabre irraa kaasee duula jibbaafi dhiphummaa hamaatu garasitti lelisaa jira. Lammiileen gara-jabeeyyiin Afrikaa kibbaa, gurraacha akka isaanii kan hojii fi jireenyaaf garas dhaqe itti bobbahuun miidhaa hamaa irraan gahaa jirani.…
Yaamicha bulchinsa magaalaa Finfinnee hordofuun Manni Marii Dhimmoota Islaamaa magaalattii deeggarsa…
Nuuralhudaa	 Sep 7, 2019 0
Kantiibaan magaalaa Finfinnee Injinar Taakkalaa Uumaa, ummanni barattoota manneen barnoota mootummaa magaalaa Finfinneetti barataniif deeggarsa akka godhu gaafatee ture. Kana hordofuun Manni Marii Dhimmoota Islaamaa magaalaa Finfinnee…
Baankiin Daldala Ityoophiyaa, damee addaa seera Shari’aa irratti hundaa’uun tajaajila dhala irraa…
Dammeen addaa kun 'Bilaal' jedhamuun kan moggaafame yoo tahu, guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee Mikaa’ilitti eebbifamuu FBC gabaase. Sagantaa eebbaa kana irratti, Prezidantiin Baankii Daldala Ityoophiyaa Obbo Baccaa…
Torbee lamaan dabre kana keessa paarlaamaa biyyoota garagaraa lamatti mudannoon walfakkaatu mudate. Biyyoonni lamaan kun tokko biyya oollaa keenya Keeniyaa fi biyya Ardii Awrooppaa Niiw ziilaand yoo tahan, muudannoo lamaan jalqabni wal…
Biiroon Barnootaa Naannoo Tigraay Qajeelfama Barnootaa Sadarkaa tokkoffaa kan hin fudhanne tahuu…
Caasaa barnoota haarawa ministerri barnootaa bara dhufu hojjii irra olchuuf baase irratti komii guddaatu ka'a jira. Akkasumas caasicha irratti garaagarummaa guddatu bulchiinsa Biiroo barnootaa naannoolee tokko tokko fi ministeera Barnootaa…
Bosonni Amaazoon gubataa jira.
Bosona guddicha dachii tanaa Amaazoonitti belbelli ibiddaa eegi qabatee bubbulee jira . Belbelli ibiddaa bosona kanatti wagga waggaan ka’uun haarawaa miti. Haa ta’u malee kan ammaa kun sadarkaa yaaddeessaa irra gahee jira. Balaan ibiddaa…
Qaxar imaammata mootummaan Chaayinaa muslimoota Wiigar ilaalchisee hordofu deeggaruun xalayaa…
Nuuralhudaa	 Aug 22, 2019 0
Ji'a lama dura Awstiraaliyaa, Niwuziiland fi Jaappaan dabalatee ambaasaaddaroonni biyyoota 22, maqaa finxaalessummaa ittisuu jedhuun cunqursaa hamaa mootummaan Chaayinaa muslimoota Wiigar irratti raawwatu balaleefatuun, dhaabbata…